Uyini umhloli wamatshe ayigugu? Umhloli wedayimane? Isibuyekezo esisha 2021
Awukho umhloli onamagatsha oyigugu othembekayo. Kukhona inqwaba yamamodeli, kodwa empeleni yibahloli bokuqina, okungaqinisekisi ubuqiniso betshe.
Ngeshwa, lokhu kungenye yamathuluzi amaningi asetshenziselwa abathengisi begugu.
Uma ubheka isithombe uzobona irula enezinombolo eziqala kwesobunxele ziye kwesokudla ngo-1, 2, 3, 4, 5….
Ama-LED avuleka uma uthinta ubuso betshe. Ungabona inombolo ehambisana nobunzima betshe.
Lolu lwazi luqondile. Lesi yisilinganiso sobukhuni, esibizwa nangokuthi i-Mohs scale
Izibonelo zobunzima obukhulu be-Mohs
1 - I-Talc
2 - iGypsum
3 - iCalcite
4 - I-Fluorite
5 - I-Apatite
6 - UFeldspar Orthoclase
7 - I-Quartz
8 - iTopazi
10 - IDayimane
Isikali sikaMohs sobulukhuni bamaminerali sisuselwa ekhonweni lesampula eyodwa yamaminerali. Amasampula endaba asetshenziswa yi-Mohs wonke amaminerali ahlukile. Amaminerali atholakala endalweni aqinile ngokwamakhemikhali Futhi eyodwa noma amaningi amaminerali enza amatshe. Njengento eyaziwayo kunazo zonke eyenzeka ngokwemvelo, lapho uMohs edala isikali, amadayimane aphezulu phezulu esikalini.
Ubulukhuni bento bulinganiswa ngokuqhathaniswa nesikali ngokuthola into enzima kunazo zonke etsheni, qhathanisa nento ethambile ngokunwaya leyo nto. Isibonelo, uma okuthile kungaklwebheka nge-apatite kepha hhayi nge-fluorite, ubunzima bayo esikalini se-Mohs bungawela phakathi kwe-4 ne-5.
Ubunzima betshe bubangelwa ukwakhiwa kwamakhemikhali
Njengoba itshe lokufakelwa ngamatshe linamakhemikhali afanayo njengetshe lemvelo, leli thuluzi lizokukhombisa kahle umphumela ofanayo wetshe lemvelo noma yokwenziwa.
Ngakho-ke, idayimane lemvelo noma elenzelwe lizokukhombisa i-10.I-ruby yemvelo noma yokwenziwa nayo izokukhombisa i-9. Ifana nesafire yemvelo noma yokwenziwa: 9. Futhi ne-quartz yemvelo noma yokwenziwa: 7…